ओली र प्रचण्ड मिल्दा काँग्रेसलाई रुनु न हास्नु ! बसे गोप्य बार्तामा
May 17, 2018 KR NEWS
दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि ‘सरप्राइज’ भएको छ । साथै सरकार, पार्टी र सिंगो राज्यसत्ता आफूप्रति एकदमै अनुदार हुने विश्लेषण पनि गरेको छ ।
३ जेठ, काठमाडौं । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबार पार्टी एकताको घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकता गर्ने सहमति नयाँ होइन । दुई दलले गठबन्धन नै बनाएर चुनाव लडेका थिए र त्यसबेला नै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पटकपटक मिति तोक्दा पनि एकता घोषणा हुन सकेको थिएन । बरु दूरी बढेको थियो । त्यसैले कांग्रेसको ठूलो पङ्ती खासगरी नेतृत्वलाई एमाले र माओवादी मिल्दैनन् भन्ने थियो । माओवादी नेताहरुले पनि त्यस्तो सन्देश पठाइरहेको थियो । तर, दुई दलले एकता घोषणा गरे । ‘यो कांग्रेसका लागि ‘सरप्राइज’ हो’ एक नेताले भने । यद्यपि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सफल एकताका लागि कांग्रेसको तर्फबाट शुभकामना दिएका छन् । नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा गरेको एउटा प्रतिवद्धता पूरा भएको बताए । साथै उनी कम्युनिष्ट आन्दोलन हिंसात्मक विद्रोहबाट संसदीय राजनीतिमा आउनु आफूहरुका लागि पनि खुसीको कुरा भएको बताउँछन् ।
हेपाहा प्रवृत्ति बढ्ने डर तर, कांग्रेसमा खुसी भन्दा आशंका बढी छ कि अब सिंगो राज्यसत्ता आफूप्रति एकदमै अनुदार हुनेछ । नेताहरुका अनुसार वाम गठबन्धनको बहुमत आएसँगै धेरथोर यो डर थियो नै तर, आज विहानबाट प्रत्येकलाई लागेको छ । एक नेता भन्छन्, ‘यो सही नहुनसक्छ । तर, सिंगो राज्यसत्ता नै अनुदार भएर जान्छ, हरेक क्षेत्रमा पेल्दै जान्छ ।’
उनीहरुको ‘कांग्रेस प्रतिस्पर्धी रहेन, सहयोगी मात्र’ भन्ने केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई त्यसको संकेत मानेका छन् । यो हेपाहा टिप्पणी भएको भन्दै एक नेताले भने, ‘आफ्नो पार्टी मिलेको बेला हाम्राबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक थिएन । फेरि उहाँ एमाले अध्यक्ष मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि हो ।’
त्यसमा सहमत देखिएका कांग्रेस नेता रिजालले पनि दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेपछि शासन सञ्चालन कसरी गर्छन् हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सत्ता जहिले पनि जसको पनि पेल्ने, मिच्ने खालको हुन्छ । त्यसमाथि दुई कम्युनिष्ट पार्टी । प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली पेल्ने खालको नै देखिन्छ’ उनले भनेका छन् ।
उनका अनुसार लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहेर काम गरे यो एकता नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक अवतरण हुनेछ । ‘त्यो सबैका लागि र देशका लागि खुसीको कुरा हुन्छ’ रिजाल भन्छन्, ‘होइन, हिजोको झापा विद्रोह वा सशस्त्र विद्रोहका पूरा नभएको एजेण्डा पुरा गर्नु छ भन्ने सोच भयो भने स्वभाविक छ, संसदमा यति ठूलो उपस्थिति र काम गर्ने शैलीले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहन्छु भन्दाभन्दै नरहने खतरा बढेर जान्छ । त्यसप्रति हामी सचेत छौं ।’
एकताअघि नै लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता भन्दा सत्ताको तागतको ध्वनि बढी आउन थालेको उनले सुनाए । ‘मैले भनेको नमान्नेलाई पेल्नुपर्छ, यसकारण कि जनताको मत मसँग छ, पेल्ने मत पाएको छु भन्ने उहाँहरुको ब्याख्या रहृयो भने स्वभाविक रुपमा अभिनायकवादी बाटोमा जानुहुन्छ । यो सबैका लागि दुःखद हुनेछ’ रिजालले भने ।
आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो हेरफेर एमाले माओवादी मिल्दा कांग्रेसको एउटा पंक्तिले आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरेको छ । कांग्रेसमा रुपान्तरणको पक्षमा मत राख्दै आएका एक नेता भन्छन्, ठूलो पंक्तिलाई अहिले जे भइरहेको छ, त्यतिको भरमा जित्न सकिँदैन भन्ने भाव आउँछ र यसले पार्टीमा ठूलो परिर्वतन ल्याउँछ ।’
किनभने देउवाले अहिलेसम्म एमाले र माओवादी मिल्दैनन्, मिल्न सक्दैनन् भन्दै आएका थिए । यसले कुनै पनि कांग्रेस माओवादीको सरकार बन्न सक्छ, देउवा प्रधानमन्त्री हुनसक्छन् भन्ने देखाउँथ्यो र देउवा बलियो भइरहन्थे ।
तर, बिहीबार दुई पार्टीको एकता घोषणा भएसँगै अब ५ वर्षका लागि सरकारको ढोका बन्द मात्र भएको छैन, यथास्थितिमा ५ वर्षपछि हुने आम चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने मत बलियो हुनेछ ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कम्युनिष्टहरु विभाजित छन्, जनमत पनि विभाजित छ । त्यसको बीचबाट हामी आइरहेका छौं, यसरी नै चल्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट कांग्रेस मुक्त भएको छ । अब कांग्रेसले रुपान्तरणको यात्रा तय गर्दै कम्युनिष्टहरुको एकताकै बीचमा आफू विजयी हुनुहुन्छ भन्ने दबाव बढ्छ ।’
नेकपा बन्यो एशियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी !
नेपाल प्रहरीले माग्यो ८ हजार जना
भाडामा मान्छे लिएर आफैलाई गोली हान्न लगाउने आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
तेश्रो ओभरमा सन्दिपले दुई रन दिएर एक विकेट लिए
नायिका सोनम कपुरको बिहे आज
बुटवलको भाटभटेनी सुपरस्टोरमा भिषण आगलागी, आगो नियन्त्रण बाहिर
वैशाख २२ गते विप्लवद्वारा नेपाल बन्दकाे घोषणा
टिप्पर सडकबाट ५ सय मिटर तल खस्दा सहचालकको मृत्यु